မတည်ငြိမ်ဆုံးကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းဝတ်စုံသစ် မိတ်ဆက်မှုအတွက် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်နေ - Arsenal Myanmar News
မတည်ငြိမ်ဆုံးကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းဝတ်စုံသစ် မိတ်ဆက်မှုအတွက် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်နေ
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ သူတို့အသင်းရဲ့ ဝတ်စုံသစ် မိတ်ဆက်ပွဲမှာ အဓိက ပုံရိပ်ကို ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေအဖြစ် အသင်းရဲ့ မပြေလည်ဘဲ အနာဂတ်တည်ငြိမ်မှု မရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်သုံးစွဲခဲ့တာကို အံ့အားသင့်နေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အသင်းရဲ့ ကြော်ငြာအများစုမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကတော့ အသင်းခေါင်းဆောင်တိုက်စစ်မှူး ပျယ်-အမ်မရိခ် အူဘာမီယန်း၊ ကွင်းလယ်လူ မီဆွတ် အိုဇေးလ်နဲ့ မက်တီယို ဂန်ဒူဇီတို့ဖြစ်ကြပြီး ဒီကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းရဲ့ အနာဂတ် မသေချာမှုကိုတော့ ပရိသတ်တွေက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆင်နယ်နဲ့ တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင်နှစ်သိန်းခွဲတန် စာချုပ်ကို ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် အောင်မြင်မှု မရသေးတဲ့ အူဘာမီယန်း၊ အသင်းမှာ မကစားရဘဲ ချောင်ထိုးခံထားရတဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ အိုဇေးလ်နဲ့ ဂန်ဒူဇီတို့ဟာ ဝတ်စုံမိတ်ဆက်မှုတွေမှာ ပါဝင်နေခဲ့ကြပြီး ကွင်းလယ်လူ နှစ်ဦးရဲ့ မျက်နှာတွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေက မတုန်မလှုပ် ကျောက်ရုပ်မျက်နှာတွေလို့လည်း ဝေဖန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အသင်းရဲ့ အက်ဖ်အေဖလားပွဲဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကို အနိုင်ရတဲ့ ပွဲစဉ်မှာ နှစ်ဂိုးစလုံးကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ အူဘာမီယန်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေက အသင်းမှာ ဆက်လက်ရှိစေချင်နေပြီး ဒီ ၃၁ နှစ်သားကြီးကို ဘာစီလိုနာကတော့ အာဆင်နယ်ရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ကွင်းလယ်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အိုဇေးလ်နဲ့ ဂန်ဒူဇီတို့ကို ရောင်းချပြီး အသင်းအတွက် ဘဏ္ဏာရေးတောင့်တင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက တိုက်တွန်းနေကြပေမယ့် နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာကတော့ သူတို့တွေအနေနဲ့ ထရိန်နင်မှာ ပုံစံကောင်းရရှိရင် အသင်းထဲကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းမယ်လို့တော့ ပြောထားခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ် ဝတ်စုံသစ် မိတ်ဆက်မှုကတော့ ပရိသတ်တွေဘက်က ထင်မှတ်မထားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို အခုလို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ မိတျဆကျခဲ့တဲ့ သူတို့အသငျးရဲ့ ဝတျစုံသဈ မိတျဆကျပှဲမှာ အဓိက ပုံရိပျကို ဖျောဆောငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှအေဖွဈ အသငျးရဲ့ မပွလေညျဘဲ အနာဂတျတညျငွိမျမှု မရှိတဲ့ ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြသုံးစှဲခဲ့တာကို အံ့အားသငျ့နခေဲ့ကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အသငျးရဲ့ ကွျောငွာအမြားစုမှာ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေတော့ အသငျးခေါငျးဆောငျတိုကျစဈမှူး ပယျြ-အမျမရိချ အူဘာမီယနျး၊ ကှငျးလယျလူ မီဆှတျ အိုဇေးလျနဲ့ မကျတီယို ဂနျဒူဇီတို့ဖွဈကွပွီး ဒီကစားသမားတှနေဲ့ အသငျးရဲ့ အနာဂတျ မသခြောမှုကိုတော့ ပရိသတျတှကေ မေးခှနျးထုတျခဲ့ကွပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆငျနယျနဲ့ တဈပတျလုပျခ ပေါငျနှဈသိနျးခှဲတနျ စာခြုပျကို ဆှေးနှေးနတေယျဆိုပမေယျ့ အောငျမွငျမှု မရသေးတဲ့ အူဘာမီယနျး၊ အသငျးမှာ မကစားရဘဲ ခြောငျထိုးခံထားရတဲ့ ကှငျးလယျလူတှဖွေဈကွတဲ့ အိုဇေးလျနဲ့ ဂနျဒူဇီတို့ဟာ ဝတျစုံမိတျဆကျမှုတှမှော ပါဝငျနခေဲ့ကွပွီး ကှငျးလယျလူ နှဈဦးရဲ့ မကျြနှာတှကေိုတော့ ပရိသတျတှကေ မတုနျမလှုပျ ကြောကျရုပျမကျြနှာတှလေို့လညျး ဝဖေနျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အသငျးရဲ့ အကျဖျအဖေလားပှဲဖွဈတဲ့ မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးကို အနိုငျရတဲ့ ပှဲစဉျမှာ နှဈဂိုးစလုံးကို သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ အူဘာမီယနျးကိုတော့ ပရိသတျတှကေ အသငျးမှာ ဆကျလကျရှိစခေငျြနပွေီး ဒီ ၃၁ နှဈသားကွီးကို ဘာစီလိုနာကတော့ အာဆငျနယျရဲ့ အခွအေနပေျေါ မူတညျပွီး ချေါယူနိုငျဖို့ စောငျ့ကွညျ့နတေယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ကှငျးလယျကစားသမားနှဈဦးဖွဈတဲ့ အိုဇေးလျနဲ့ ဂနျဒူဇီတို့ကို ရောငျးခပြွီး အသငျးအတှကျ ဘဏ်ဏာရေးတောငျ့တငျးအောငျ လုပျဆောငျဖို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ တိုကျတှနျးနကွေပမေယျ့ နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာကတော့ သူတို့တှအေနနေဲ့ ထရိနျနငျမှာ ပုံစံကောငျးရရှိရငျ အသငျးထဲကို ပွနျလညျထညျ့သှငျးမယျလို့တော့ ပွောထားခဲ့ပမေယျ့ ဒီနှဈ ဝတျစုံသဈ မိတျဆကျမှုကတော့ ပရိသတျတှဘေကျက ထငျမှတျမထားတဲ့ တုံ့ပွနျမှုကို အခုလို ရရှိခဲ့တာဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-24T05:00:47+00:00	July 24th, 2020|News|Comments Off on မတည်ငြိမ်ဆုံးကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းဝတ်စုံသစ် မိတ်ဆက်မှုအတွက် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်နေ